सस्तो OBB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू | एक ट्रेन सेव
OBB प्रस्तावहरु अस्ट्रिया भित्र रेल सेवाहरू र यूरोप भर. सहि टिकटको साथ, you can visit all the best युरोपमा छुट्टी ठाउँहरू. टिकट र कार्ड सदस्यता को विभिन्न वर्ग संग, OBB सबैको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ.
को मूल्य OBB ट्रेन टिकट यात्राको दिन नजिकि बढ्दै जान्छ. तपाईं आफ्नो OBB ट्रेन टिकट प्रस्थान दिन देखि सकेसम्म टाढा बुकिंग गरेर पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ. OBB ट्रेन टिकटहरू सकेसम्म चाँडो उपलब्ध छन्3गर्न6महिना अगाडि रेल प्रस्थान. चाँडै बुकिंग सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं सस्तो OBB ट्रेन टिकट पाउनुहुन्छ. तिनीहरू पनि संख्या मा सीमित छन्, छिटो तपाईं बुक, तपाईको लागि सस्तो. OBB ट्रेन टिकटमा पैसा बचत गर्न, चाँडै तपाईको टिकट किन्नुहोस्.
OBB ट्रेन टिकट हो अफ-पीक अवधिको समयमा सस्तो, हप्ताको सुरूमा र दिनको बखत. तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ सस्ता रेल टिकट हप्ता भित्र. मंगलबार, बुधवार, र बिहीबार, OBB ट्रेन टिकट सबैभन्दा किफायती छन्. बिहान र साँझ काम गर्ने यात्रुहरूको मात्राको कारण, ट्रेन टिकट बढी खर्च भयो. यो बिहान र साँझको कम्युटको बीच कुनै पनि समयमा यात्रा गर्न निकै सस्तो छ. हप्ताहरू रेलहरूका लागि अर्को शिखर अवधि हो, विशेष गरी शुक्रवार र शनिबार. OBB train ticket prices also increase on सार्वजनिक बिदा र स्कूल बिदा.
OBB ट्रेनहरू उच्च माग मा छन्, र न्यूनतम प्रतिस्पर्धा संग, तिनीहरू हाल अष्ट्रियामा रेलहरूको लागि शीर्ष छनौट रहन्छन्. तिनीहरूले ट्रेन टिकट प्रतिबन्धहरू सेट गर्न सक्दछन् जुन उनीहरूसँग छ कि टिकट विनिमय वा फिर्तीलाई निषेध गर्दछ जबसम्म यो व्यवसायको प्रकारको टिकट छैन।. जहाँसम्म अझै वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो टिकटहरू दोस्रो हात बेच्न सक्नुहुन्छ, OBB दोस्रो हात टिकट बिक्री को लागी अनुमति दिदैन. यसले कसरी तपाईंको पैसा बचत गर्दछ? तपाईको टिकट मात्र अर्डर गर्नुहोस् जब तपाई आफ्नो तालिकाको निश्चित हुनुहुन्छ तपाईले दुई पटक एक टिकट बुकिंग गर्नबाट बचाउँनुहुनेछ किनकि केहि आयो र तपाईले मूल टिकट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।.
OBB टिकट एक एकल रेल यात्राको लागि € १55 देखि €१ सम्म सम्म उच्च सम्म शुरु हुन्छ. को OBB ट्रेन टिकटको मूल्य कुन प्रकारको टिकट किन्नुहुन्छ र कहिले तपाईले यात्रा गर्न छनौट गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ:
1) तपाईं शहर केन्द्रमा आइपुग्नुहुन्छ. यो OBB रेलहरूको एक फाइदा हो जब हवाईजहाजको तुलनामा. OBB ट्रेनहरू र अन्य सबै ट्रेनहरू शहरको कुनै पनि ठाउँबाट अर्को शहरको बीचमा यात्रा गर्छन्. यो तपाइँको समय र एयरपोर्टबाट शहरको केन्द्रको लागि ट्याबको लागत बचत गर्दछ. ट्रेन बिसौनी संग, यो सहरको कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सजिलो छ जुन तपाईं जानु भएको थियो. तपाईं कहाँबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेले खास फरक पार्दैन, म्यूनिख, सल्जबर्ग, लिन्ज, वा कोलोन, शहर सेन्टर स्टप OBB रेल का एक प्रमुख लाभ हो!
3) सतह मा, OBB ट्रेन टिकटको मूल्य बजेट एयर टिकट भन्दा बढी महँगो देखिन्छ. तथापि, जब तपाईं समावेश सबै शुल्क तुलना गर्नुहुन्छ, OBB ट्रेन टिकट एक राम्रो मूल्य सम्झौता छ. सामान शुल्क जस्तै अन्य लागतहरूको साथ जुन तपाईंले रेलहरूमा भुक्तान गर्नु पर्दैन, OBB द्वारा यात्रा गर्दै सबै भन्दा राम्रो छ.
OBB K تکिल टिकटहरू नियमित OBB टिकट हुन्, र ती लागि प्रस्ताव छन् रात रेलको माध्यम बाट जडानहरू. The OBB Komfort ticket covers the cost of the journey, चयन गरिएको यात्राको कोटीमा आरक्षण, र स्लीपर केबिनमा खाजा.
स्थानीय नागरिकका लागि, सदस्यताका दुई प्रकार छन्, भोर्टिलकार्ड र ओस्टेरिचकार्ड. अन्तर्राष्ट्रियहरूका लागि हामी लामो समय अग्रिममा किन्न सुझाव दिन्छौं र त्यसपछि तपाईंलाई सस्तो विकल्पको साथ प्रस्तुत गरिनेछ.
यात्रीहरूले एक Osterreichcard क्लासिक खरीद गर्न सक्छन्. एक Osterreichcard क्लासिक संग, तिनीहरूले एक छुट छ 100% on the cost of seat reservations for 1st and 2nd class. With an Osterreichcard Classic 2nd class, तपाईं एक प्राप्त 50% मानक प्रकार एकल टिकटको साथ कक्षा २ देखि १ कक्षामा परिवर्तनमा छुट.
तपाईं सक्छ बोठिक छ एक मलाई थाहा छमा अग्रिम on domestic OBB को लागी ट्रेनहरु3यूरो. तपाईं हुनेछ getapersonal सीट आरक्षण गरे पछि.
हो. तपाईं रमाउन सक्नुहुन्छ सबै OBB ट्रेनहरूमा नि: शुल्क वाइफाइ इन्टर्नेट र सबै यात्रा वर्ग जब तपाईं OBB टिकट खरीद गर्नुहुन्छ (प्राथमिकता SaveATrain.com मा.
यदि तपाईंले यो पोइन्ट पढ्नु भएको छ भने, तपाईंलाई थाहा छ तपाईंलाई तपाईंको OBB ट्रेनहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्दछ र तपाईंको OBB ट्रेन टिकट खरीद गर्न तयार हुनुहुन्छ एक ट्रेन सेव